တရုတ်-ကာဇက်စတန်က နျူကလီးယားလောင်စာ သိုလှောင်ရေးအစိတ်အပိုင်းတပ်ဆင်ခြင်း ပူးတွဲထုတ်လုပ်မှု စတင် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဖူကျန့်ပြည်နယ် Fuqing မြို့ရှိ Fuqing စီမံကိန်း၏ အမှတ် ၅ နျူကလီးယားယူနစ်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
NUR-SULTAN ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသရှိ Ust-Kamenogorsk မြို့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံတို့ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော နျူကလီးယား လောင်စာ သိုလှောင်ရေးအစိတ်အပိုင်းတပ်ဆင်ခြင်း စက်ရုံသည် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်၌ လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) Uranium Resources ကုမ္ပဏီလီမိတက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကာလ နှစ်ပေါင်း ၂၀ သတ်မှတ်ထားသော စီမံကိန်းအား CGNPC Uranium Resources နှင့် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ အမျိုးသား အဏုမြူကုမ္ပဏီ Kazatomprom တို့က ပူးတွဲရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းစီမံကိန်းအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် တရားဝင်စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းစီမံကိန်းသည် နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို့အတွင်း အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ယူရေနီယံ နျူကလီးယားလောင်စာ အစိတ်အပိုင်းများအား တစ်နှစ်လျှင် တန် ၂၀၀ ထုတ်လုပ်ရန် ပုံစံထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သိုလှောင်ရေးအစိတ်အပိုင်းတပ်ဆင်ခြင်းစက်ရုံသည် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ယူနစ် ကီလိုဝပ် ၈ သန်း လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံတို့သည် ယူရေနီယံ အရင်းအမြစ် ထုတ်ယူရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်အဓိက လုပ်ငန်းဆောင်ရေး စသည်တို့တွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Kazatomprom ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ယူရေနီယံ ထုတ်လုပ်သူများအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကနဦးယူရေနီယံထုတ်လုပ်မှု စုစုပေါင်း၏ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း ပမာဏရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
NUR-SULTAN, Nov. 11 (Xinhua) — A nuclear fuel assemblies plant built byaChinese-Kazakh joint venture was put into operation on Wednesday in the city of Ust-Kamenogorsk in the East Kazakhstan Region, the press service of China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) Uranium Resources Co. Ltd said.
With an operation period of 20 years, the project is jointly funded by CGNPC Uranium Resources and Kazakhstan’s national atomic company Kazatomprom.
Kazatomprom is one of the world’s largest producers of uranium, with its attributable production accounting for 23 percent of the total global primary uranium production in 2020. Enditem